Qabsoo ilmaan oromoo dhiiga fi lafee itti cabsan, OPDO fi .. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQabsoo ilmaan oromoo dhiiga fi lafee itti cabsan, OPDO fi ..
Qabsoo ilmaan oromoo dhiiga fi lafee itti cabsan, OPDO fi ..
Qabsoo ilmaan oromoo dhiiga fi lafee itti cabsan, OPDO fi kaadireen lafa oromoo akka qircaa gurguraa turte, habashaa fi harcaatota ilmaan minilik waliin finfinnee tulluu daalatti keessa bookisu.
Duraan mootummaan gabroomfataan maqaa ABO jedhuun sabboontota ilmaan oromoo ajjeesaa fi halkaan butanii fannisaa turan opdos dabalate,yeroo ammaas kan argaa jirru OPDOn erga aangoo qabattee sabbontota fi namoota qabsoo oromootiif laalatan maqaa ABO shanee jedhuun qeerroo bara dheeraa qabsaaya turani fi qeerroo waggaa 4 guutu dararamaa turan dararaa jiru.oromoon bakka jirtanii kaatani sabboontota OPDOn maqaa shanee jedhuun admsan kanaa irraa akka falmitan kuni dhaamsa kiyya.gaafiin ilmaan oromoo bara dheeraa irratti dhuman tokko osoo hin deebi’iin maqaa bilisoomne jedhuun namoonni dhuunfaa qabsoo oromoo irraa yoo dhiichisani fi ittiin ofwaaman agarra.kaadireen opdokanaafu bilisummaan oromoon argate tokkollee hin jiru.oromoon guyyaan bilisoomu gaafa gadaa isaa deeffate fi seena qabsaawota kaleessa xurree isaani qabatee yoo falmate qofa.ijjannoo fi tokkummaa dhabuu saba keenyaatu harcaatuun minilik deebite nurraa akka sirbitu taasise.daangaan haadha fi jaarsi oromoo irratti wareegaman osoo hiika hin argatin,ilmaan oromoo kumaataman osoo beela keessa jiran OPDOn magaalaa finfinnee bareechuuf qarshii miliyoonotaan sassaabataa jiru.kuni madaa seena bara baraati.
“Mootummaan guutuutti waadaa nuu gale haale, guyyaa hinbeekamneef as keessa turtu” nuu jedhe jedhu #WBO mooraa Xoollaay
Waraanni qabsoo karaa nagaa qulqullummaan gaggeessuuf amananii galan kuma tokkoo ol mooraa Xollaay keessatti rakkoo hammaataaf saaxilamaa jiru. Waraanni kun shira Mootummaa fi addatti Jaawar Mohaammad obbo Baqqalaa Garbaa waliin ta’uun xaxe dhugaa se’uudhaan haasaa miidiyaan OMN fi Jaawar yeros dubbataa turan onnachiisuu irraa; yoo duuti dhufe waliin duunaa nutti amanaa galaa jechuu qaamota lamaan kanaatti amananii qawwee isaanii hiikkatanii galan. Ta’ullee waraana kanarratti yaaliin hidhaa jalqabuudhaan yerosuma gara mooraa Xoollaay mana hidhaatti geeffamanii hidhaman. Yeruma kana waadaan kijibaa Jaawar gale hojiirra ooluun hafee dabalataan waraana kana sobuu fi sossobuudhaan akkasaan mooraa Xoollaay deeman taasisan. Kana keessatti qoodni obbo Baqqalaa Garbaa taphate isa olaanaadha. Abbootiin gadaa Oromoos siyyaasa shiraa kanatti dammaquurra qaamni uummataaf qabsaa’aa ture kunneen waan isaan jedhan dhugaa se’uurraa qamota kana akkasaan bosonaa Qawwee lafa kahanii galan qooda isaanii bahatan. Ta’us abbootiin gadaa Oromoo qulqullummaa dhumaan nagaa Oromiyaatti kan amananii fi Jaawar Mohaammad fi Baqqalaan waan uummata miidhu hinojjetan jechuutti aamananii hojii kanatti bobbaa’uunsaanii beekamaadha.
Waraanni kun akkuma mooraa waraanaa Xoollaay geeffamaniin waraanni mootummaan Raayyaan ittisa biyyaa hidhannoon itti marsanii jechoota haamilee waraana kanaa xuqan jechoota sammuu qabsaa’aa tokkoo xuqan dubbachuudhaan roorroo hadhaa’aa irraan gahan. Gama soorraataniis soorrata dhorkatamuun nyaataan miidhamuu cinatti Soorrata waraana kanaa summeessuudhaan qaamni mootummaa waraana 200 dhibba lamaa ol balaa kanaan akka miidhaman taasise. Obbo Jaawar Mohaammad akkuma dura dhaadatan waraana kanaaf nii dhaabbatu uummatni cina akka dhaabbatu nii akeeku jennee abdannulle rakkoo waraana kanarra gahu osoo arganii qaama mootummaa ykn raayyaa ittisa biyyaa baabsuun/deggaruudhaan balaaf waraanni bilisummaa Oromoo kun akka saaxilamu karra saaquun rakkoo waraana kanarra gahu uummatni bahee akka balaaleffatu gochuurraas of qusatan.
Waraanni WBO har’a Xoollaay irraa bilbilaan yaada naa laateen obbo Jaawarii fi Obbo Baqqalaa haalaan kan mufatanii jiraniif lubbuu isaanii akka dhabamu taasisuuf haala mijeessuu jaroota kanaa uummatni akka baruu qabus dhaamanii jiru. Har’as waadaan mootummaan galeef guutuutti kan haalamee jiru ta’uu dubbataa jiru. “0bbo Mogos namni jedhamu guyyaa dheengaddaa dhufee Dilbata mooraa kanaa baatu leenjii xumurtanii jirtu. Ergaa Mootummaa irraa fuudheen dhufee isinii hima. Erga jedheen booda dilbata har’aammoo mooraa kana keessa guyyaa hinbeekamne turtu jechuun ajajoota keenyatti himan” jedha miseensi WBO mooraa Xoollaay har’a moorichaa bahuuf abdiin eegaa turee dhabe. Guyyaa hinbeekamneef turtu jechuun ammas akka hidhaammatti moorichatti ittifamanii jiraachuu dubbata. Rakkoon guddaan nu mudatee lubbuun jiraachuu yaaddofnee jirra as keessatti nu fixuuf waan jiraniif uummatni nuti abdannee galle sagalee nuu ta’ee mooraa kanaa nu haa baasu jechuun
Qabsoon keenyaan egeree keenya bareechina!
Qeerroon har’aa hoggantoota keenya egeree ti!!
“Salphinnaa fi Dheedhii hin quufani”
Uffata Raayyaa ittisa biyyaa uffatanii qawwee Mootummaan itti hidheen akkanatti basha’anii bakka jiran of wollaaluun rasaasaa xaaxessuun kun Nafxanyoota daangaa malee macheesseera.
Dhugaadha Mootummaan hin jiru nama jechisiisa.yabaabulli akka fedhetti seer-maleessummaa babal’isaa jira.Dammillee yoo bikkaa darbe ni bushaawa dhiiroo.jarattiin ABN jedhamtu tun keessa kuttee jirti.Qeerroo of hin dagatiiniitii quphanii eegi!
#Boortittin dhufaa jirti.
Benishaangul Gumuz Afaan Oromoo ‘afaan hojii hin goone’